wararka maanta-arlaadii.net » ITOOBIYA oo diidan Musharixiinta kale ee Soomaaliyed, Xasan Sheekh oo Cadaawad badan u abuuraysa, Maxay tahay sababta Beesha Hawiye isugu soo koobtay Itoobiya
Dowladda Itoobiya oo miisan iyo door weyn ku leh arrimaha Soomaaliya ayaa waxay sameynaysa siyaasad mustaqbalka dambe abuuraysa cadaawad iyo is diidanaan ka dhex dhaca beelaha Soomalida, waxayna ku dadaalaysa inay sameyso doorkii 2004 tii markii ay xoogeeda isugu geysay C/llaahi Yuusuf mid la mid ah dhacdadaas ayay haatan Itoobiya ku mashquulsan tahay.
Dowladda Itoobiya waxay ku qancinaysaa Musharixiinta kale ee soomaalida ee u tartamaysa jagada Madaxweynaha Soomaaliya inay isaga haraan doorashada isla markaana u tanaasulaan Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamud.
Qorshahaas waxaa loo soo bandhigay toddobaadkii hore Madaxda Maamul Goboleedyada, Galmudug, Hirshabeele iyo Koonfur galbeed.
Balse Shariif Xasan Sheekh Aadan Madaxweynaha Maamul Goboleedka koonfur galbeed, waa uu diiday inuu ka tanaasulo hamigiisa ah in loo soo doorto Madaxweynaha Soomaaliya.
Sidaas si la mid ah Ra’iisal Wasaare Cumar C/rashiid ayaa ka biya diiday soo jeedinta Itoobiya ee ah in loo tanaasulo Xasan Sheekh.
Marka aad eegto dadaalka Itoobiya ku taageersa ayaa waxaad kaaga soo dhex baxaya in Itoobiya Xasan Sheekh u abuuraysa cadaawad la mid ah tii ay u abuurtay C/llaahi Yuusuf 2004 tii markii lagu doonayay Nairobi.
Naceybkii C/llaahi Yuusuf waagaas loo qaaday waxaa uu sababay inuu saameyn ku yeesho reerkiisa ama beesha uu ka soo jeedo.
Haatan Itoobiya oo diidan in musharixiinta beelaha kale ka soo jeedan u diidan tahay inay u tartamaan jagada Madaxweynaha Soomaaliya waxay abuuraysa isku dhac siyaasadeed oo mustaqbalka dambe saameyn ku yeelan doona beesha Hawiye.